Chigadzirwa Kuedza - Beijing Grip Pipe Technology Co, Ltd.
Beijing Grip Pipe Coupling dzinonyanya kusanganisira zvinotevera coupling akateedzana:
GRI-PG Axially inodzorwa neakaviri anchor mhete yekubatanidza. GRIP-GF Moto humbowo pombi yekubatanidza. GRIP-M Iyo multifunctional yekubatanidza --- kubatana uye conpensator mune imwe. GRIP-R Pipe yekugadzirisa chinosunga --- hinged mhando. GRIP-D Yechipiri kukiya pombi simbi - Pipe kugadzirisa ine 2 yekuvhara inoshanda yekuvhara system yekubatanidza. GRIP-GT Isina- simbi pombi yekubatanidza. GRIP-GTG Simbi uye isiri yesimbi pombi yekubatanidza. GRIP-RT Pipe ichibatanidza nerutivi nzira. GRIP-Z Yakasimbiswa axially yakadzora kubatanidza uye zvichingodaro. Aya ekubatanidza akateedzana anosangana nemutengi wepombi kubatanidza uye kugadzirisa zvinodiwa.
Beijing Grip Pipe Coupling yapasa bvunzo yakakwana, inosanganisira kudedera kuneta bvunzo, kumanikidza pulsation bvunzo, kukanganisa bvunzo, kuputika kumanikidza bvunzo, kudhonza-kunze bvunzo, bvunzo bvunzo, moto bvunzo, yakakwira uye yakaderera tembiricha bvunzo uye zvichingodaro.
Burst kumanikidza bvunzo
kuneta kuneta bvunzo
Yakadzika tembiricha bvunzo
Yakakwirira uye yakaderera tembiricha bvunzo makakombama
PURE-OUT Bvunzo ZVINODZORA
Dzvanya kuneta bvunzo
Beijing Grip Pipe coupling's akakosha maficha:
Kwakanaka kwakawanda kuita: yakakodzera pombi dzesimbi uye mapaipi asiri esimbi. Uye hazvidi chinhu chakakosha pane vezvenhau mukati meipi, ukobvu hwepombi uye kumeso kumeso.
Hwakasiyana-siyana hwekushandisa: haingori chete ine yakanaka yekushandisa pombi yakajairwa, asi zvakare inokwanisa kuramba yakasimba kumanikidza kutakura uye leakage-proof yemapaipi ane axial misha, kutsauka kweangular uye zvisingaenderane nekunze dhayamita panguva imwe chete.
Inochinjika uye inoshanda mashandiro: chigadzirwa chakareruka, chiumbwe saizi uye inogona kuiswa nezvishoma maturusi. Panguva imwecheteyo, ine chimiro chakarongeka uye dhizaini, zviri nyore kubvarurwa munguva pfupi. Kunze kwezvo, iyo yepamusoro inoshandiswazve uye iri nyore kuchengetedzwa.
Hwakavimbika hwehunhu hunovimbisa kuchengetedzeka: natsa dhizaini dhizaini uye yakanaka yekudzivirira moto zvinhu zvemhando zvinovimbisa kuchengetedzeka kana yaiswa mumoto unorambidzwa uye unodzivirira kuputika matunhu.
GRIP pombi yekubatanidza inokupa iwe nyore kuisa, kuchengetedza nguva uye mhinduro yekuchengetedza mari. GRIP pombi yekubatanidza inobvumira pombi kuti ibatanidzwe pasina kudikanwa kwekuchinjika, kubvongodza, kusunga kana kutetepa. Nekungochera mapaipi maviri pamwechete uye nekubatanidza neGRIP pombi yekubatanidza, nzvimbo, huremu, nguva uye mutengo wekuchengetedza zvinoitwa neese kuiswa.
Zvakanakira GRIP Kubatanidza
1. Kushandiswa kwepasi rose
• Inoenderana nechero yechinyakare jointing system
• Inobatanidza pombi dzezvinhu zvakafanana kana zvisina kufanana
• Kurumidza uye nyore kugadzirisa kwepombi dzakakanganiswa pasina kukanganiswa kwebasa
• Kushushikana-isina, inochinjika pombi yakabatana
• Inobhadhara axial kufamba uye angular deflection
• Dzvinyiriro-inodzivirira uye inodonhedza-proof kunyangwe isina gungano pombi
3. Easy kubata
• Inosvikika uye inoshandiswazve
• Kuchengetedza kwakasununguka uye kunetseka pasina
• Hapana nguva inopedza nguva uye basa rakakodzera
• Easy yekuisa tekinoroji
• Kufambira mberi kwekuvhara chisimbiso
• Kufambira mberi kwekusimbisa mhedzisiro
• Ngura nemishonga uye tembiricha nemishonga
• Yakanaka kusagadzikana nemakemikari
• Nguva yakareba yebasa
5. Kuchengetedza nzvimbo
• Dhizaini dhizaini yekuisa-kuchengetedza-kuisa pombi
• Kurema kwechiedza
• Inoda nzvimbo diki
6. Kurumidza uye Kwakachengeteka
• Kuisa kuri nyore, hapana moto kana kuputika njodzi panguva yekuisirwa
• Hapana mutengo wezviyero zvekudzivirira
• Inotora vibration / oscillations